Tchinde, mpanoratra ao amin'ny TELES RELAY
ny Banky Iraisam-pirenena, ny Covid-19 dia hamafa ny fandrosoana dimy taona aty Afrika
ny Banky Iraisam-pirenena, ny Covid-19 dia hamafa ny fandrosoana mandritra ny dimy taona aty Afrika Raha mihatra atsinanana sy atsimon'ny kaontinanta ny krizy, Senegal, Côte d'Ivoire ary Ghana dia manao fisaorana bebe kokoa noho ny fambolena , manipika ny ...
FINANCE-AFRICAINE: Iza ireo banky 200 ambony amin'ny taona 2020?
Iza ireo banky afrikanina 200 voalohany amin'ny taona 2020? Taorian'ny herintaona nisian'ny fanarenana matanjaka sy ny fanatsarana ny fanantenana dia nikatona ny fiakaran'ny banky afrikanina - anjakan'ny Standard Bank, First Rand ary National Bank of Egypt ...
Kamerona: Niady mafy i Maurice Kamto hihetsika hanohitra an'i Paul Biya
Nanamarika ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy tao Douala, ny andron'ny fihetsiketsehana natombok'i Maurice Kamto hitaky ny fialàn'i Paul Biya dia tsy nanetsika firy. Amin'ny faran'ny andro iray henjana, izay hahitana ...
Kamerona: "taxi taxi", azon'izy ireo atao ve ny mandanja amin'ny standoff Biya-Kamto?
Andro tandindomin-doza ity izay hisokatra anio talata ao Kamerona, izay iantsoan'ny mpanohitra fihetsiketsehana izay noraran'ny manampahefana. Ary eo afovoan'ny lalao, mpilalao sarimihetsika izay tsy nampoizinay: ny mpamily ...
Amina Mohamed: "Manana ny mombamomba anao aho hitarika ny WTO"
Fanavaozana ny WTO, fandefasana indray ny rafitra fandaminana ny fifanolanana… Ny minisitra Kenyana dia manome tsipiriany momba ireo tetikasa miandry azy raha voafidy ho filohan'ny fikambanana izy. Ireo roa farany niatrika ny fifidianana tamin'ny toeran'ny Sekretera jeneraly…
Tao amin'ny horonan-tsary navoaka tao amin'ny kaonty Twitter-ny, Neymar dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa tapitra ny fiarahamiasa miaraka amin'i Nike hiditra ao amin'i Puma. “Ity no tantarako miaraka amin'i Puma. Lehibe aho nijery horonantsary misy angano mahafinaritra…
Chadwick Boseman dia nalevina tao amin'ny toeram-pandevenana fiangonana Welfare Baptist Church any Belton, South Carolina, kilaometatra vitsivitsy monja miala ny tanànany any Anderson. Manamarina izany ny taratasim-pahafatesana azon'i E! News. ...